तीन दलका आ–आफ्नै चिया पसल - Khojpatro
तीन दलका आ–आफ्नै चिया पसल राजनीतिक आस्थाकै आधारमा यी पसलहरुले ख्याति प्राप्त गरेका छन् । यही कारणले बाहिरबाट आउने आन्तरिक पर्यटकहरु यी चिया पसलमा चिया पिउन आउने गरेका छन् ।
khojpatro १५ असार २०७८, मंगलवार ०२:४२
बर्दिया । नेपालीका लागि चिया केवल एउटा पेय पदार्थ मात्र होइन, एउटा भावना समेत हो । चिया, साथी र गफ । यति भए हामी नेपालीलाई के चाहियो ! जाडो होस् वा गर्मी, चिया पसलमा बसेर चिया पिउदै गफ गर्नुको मजा नै बेग्लै हुने गर्छ । तर चियासँगै मनपर्ने मान्छेसँग मीठो गफका लागि यहाँ खोजे जस्तो ठाउँ नै कति छ र ?
हरेक चिया पसलका आ–आफ्नै बिशेषता हुने गर्छन् । यस्तै बिशेषताले भरिएको छ बर्दिया ठाकुरद्वारा चोकको तीनवटा चिया पसल ।
तीन दलका तीन चिया पसल । सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ तर यथार्थ यही हो । बर्दियाको ठाकुरद्वारा चोकमा तीनवटा चिया पसल छन् । उक्त पसलहरुमा राजनीतिक बिचारका आधारमा चिया पिउन जमघट हुने गरेको छ । २०६४ सालको पहिलो संविधानसभा चुनावले देशभरका नागरिकहरुलाई लामो समयको अन्तराल पछि राजनितीक माहोल सिर्जना गर्यो । देश चुनावमय हुदै गर्दा बर्दियाको ठाकुरद्वारा अछुतो रहने कुरा भएन ।
ठाकुरद्वारामा पनि चुनावको गर्मीले नागरिक बिच आ–आफ्ना बिचारको आधारमा बहस गर्ने माहोल बनायो । बहस त गर्ने तर कहाँ ? राजनीतिक बहस गर्नको लागि चिया पसलको बिकल्प त के छ र ? उक्त समयमा ठाकुरद्वारा चोकमा तीनवटा चिया पसल थिए । उक्त पसलहरु एकआपसमा जोडिएका छन् । राजनीतिक कार्यकर्ताले चिया पिउदै, निर्धक्क गफ गर्ने गर्छन् यहाँ ।
तीनवटा पसल मध्ये दक्षिणपट्टी छेउमा भण्डारी कोल्ड सेन्टर एण्ड होटल नाम गरेको चिया पसल छ । यस पसलका संचालक गणेश भण्डारी हुन् । भण्डारी भन्छन् २०६३ सालको परिवर्तन पछि २०६४ मा भएको संविधानसभा चुनावको कारण यस क्षेत्रका नागरिकबीच विचारको आधारमा चिया पसल छनोट गरेर चिया पिउने चलन बसेको हो । भण्डारी आफू एमाले समर्थक भएको स्विकार गर्छन । भण्डारीले चिया नपाएको अथवा बन्द भएको समय बाहेक सबै आ–आफ्नै राजनीतिक विचारको आधारमा पसलमा आउने गरेको बताउछन् । भण्डारीको चिया पसल सवैभन्दा पुरानो चिया पसल हो ।
यस्तै अर्को हो, वीचमा रहेको थापा होटल । थापा होटलका संचालक हुन् टिका थापा । कांग्रेस निकट थापा भन्छिन् २०६३ सालको परिवर्तनपछि ठाकुरद्वारामा हुने राजनीतिक कार्यक्रममा दल अनुसार चिया पिउन पसल छनोट गर्ने परिपाटी बस्दै गएका कारण यस्तो भएको हो ।
उत्तरपट्टी छेउमा रहेको छ समधिनी नास्ता पसल । यसका संचालक हुन् चमेली थरुनी । माओवादी निकट थरुनी भन्छिन् आफूहरुबीच राम्रो सम्बन्ध भएपनि चिया पिउन राजनीतिक विचारका आधारमा आउने गरेका छन् । थरुनीले आफूकहाँ माओवादी निकट कार्यकर्ताहरु बढि आउने गरेको बताइन् ।
स्थानीय पृथ्वी थारुका अनुसार दलका कार्यकर्ता राजनीतिक गफ गर्नकै लागि भएपनि आ–आफ्नै बिचारको आधारमा चिया पसलमा जाने गर्छन् । थारुले राजनीतिक कार्यकर्ता आफ्नै दलको चिया पसलमा गएपनि कुनैपनि दलमा नभएका नागरिक भने सवै चिया पसलमा जाने गरेको बताए ।
राजनीतिक विचारका आधारमा कसैलाई पक्षपोषण गर्नु र कसैलाई निषेध गर्नु राम्रो होइन । यहाँका चिया पसल यसको राम्रो उदाहरण हो । २०६४ सालमा भएको संविधानसभा चुनावमा राजनीतिक विचारका आधारमा चिया पसल रोज्ने खालको माहोल सिर्जना भएपनि अहिले भने त्यस्तो छैन । ठाकुरद्वाराको यो तीनवटा चिया पसल अहिले स्थानीयको लागि सामान्य भएपनि बाहिरबाट घुम्न आउनेको लागि भने बिशेष बनेको छ ।
राजनीतिक आस्थाकै आधारमा यी पसलहरुले ख्याति प्राप्त गरेका छन् । यही कारणले बाहिरबाट आउने आन्तरिक पर्यटकहरु यी चिया पसलमा चिया पिउन आउने गरेका छन् ।